မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေ
Posted by Phyo on Aug 5, 2010 in Education, News, Society & Lifestyle | 15 comments
ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို လူဦးရေ ကိန်းဂဏန်း အတိအကျသိရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လူအများစုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စီမံကိန်းတွေ၊ ပေါ်လစီတွေ၊ ဥပဒေတွေ ချမှတ်ရာမှာ လူဦးရေနဲ့ တိုင်းဆပြီး ချမှတ်ကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် အုပ်ချုပ်သူဖြစ်မယ့် သူတွေဟာ လူဦးရေကို ကြည့်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ကြပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဆိုရင်လည်း လူများစု အကြိုက်တွေ့မယ့် ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုများကို ထုတ်လုပ်ပြီး ကြော်ငြာဖြန့်ဖြူး ကြပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုး လိင်တူချစ်သူ တစ်ဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်လို လိင်တူချစ်သူ ဘယ်နှစ်ဦး ရှိမလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ လိင်တူချင်း စိတ်ဝင်စားတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အထီးတည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရလို့ စိတ်အားတက်ရသလို၊ ကိုယ့်အတွက် နယ်ပယ်ကျဉ်းကျဉ်းလေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်လာပြီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုမို ယုံကြည်မှု ရှိလာစေပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ့်လို လူနည်းစုတွေကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ ၃၇၇လို ဥပဒေပုဒ်မတွေ၊ မူဝါဒတွေကို ပယ်ဖျက်ဖို့ အများအင်အားနဲ့ စုပေါင်းတောင်းဆို နိုင်ပါတယ်။ မဲပေးနိုင်တဲ့ သူတွေဟာလည်း အရည်အချင်းရှိတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေကို ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီး၊ အများအကျိုးကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပြမယ်ဆိုရင် လူတွေရဲ့ အဆိုးအမြင်တွေကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ် နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေကို တစ်နိုင်ငံလုံး စာရင်းကောက်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို အလွန်မှ ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်လို နိုင်ငံမှာတောင် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာမှာ လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ ပက်သက်တာတွေ ထည့်မမေးပါဘူး။ သီးခြား ကောက်ခံတဲ့ စစ်တမ်းတွေကို အခြေခံပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ခန့်မှန်းကြရတာပါ။
လိင်မှုဗေဒ ပညာရပ်ရဲ့ ဖခင်ကြီးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဲဖရက် ကင်စေ (Alfred Kinsey) ရဲ့ ရှာဖွေ တွေ့ရှိချက်အရ ယောက်ျားအားလုံးရဲ့ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လိင်တူဆက်ဆံဖူးကြပြီး၊ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကတော့ လုံးဝ လိင်တူချင်း ချစ်သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ၁၉၄၈မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့စာအုပ် Sexual Behavior in the Human Male မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တွေမှာလည်း မိန်းမ အားလုံးရဲ့ ၈ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ လိင်တူချင်း ဆက်ဆံဖူးကြတယ်လို့ ၁၉၅၃မှာ နောက်ထပ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ် Sexual Behavior in the Human Female မှာ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ် နှစ်အုပ်ကို အခြေခံပြီး Kinsey Report လို့ခေါ်တဲ့ ပျမ်းမျှလူ ၁၀ဦးတိုင်းမှာ လိင်တူချစ်သူ တစ်ဦး ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
ဒီ သီအိုရီ အတိုင်းဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို လူဦးရေရဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာ လိင်တူချင်း ချစ်သူတွေ လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်တမ်းတွေ ကောက်ယူရာမှာ လိင်စိတ်ခံယူမှုကို ထည့်မမေးကြသလို၊ ဖြေကြားသူတွေ ဘက်ကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်လို့ ထုတ်မပြော လိုကြပါဘူး။
နောက်ပိုင်း လိင်ကိစ္စအပေါ် မြင်တဲ့ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲလာတာ နဲ့အမျှ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေး စစ်တမ်းတွေ ကောက်ခံရာမှာ လိင်စိတ်ခံယူမှုကိုပါ ထည့်သွင်း ကောက်ခံလာကြပြီး၊ ဖြေကြားသူရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း လျှို့ဝှက်ထားပေးတဲ့ စနစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတာမို့ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပိုမို တိတိကျကျ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရရှိလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လိင်တူချစ်သူ ဦးရေကို အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းနိုင် လာပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း စနစ်ဟာ ပြည့်စုံတိကျမှုရှိတာမို့ သူတို့ရဲ့ ခန့်မှန်း တွက်ချက်မှုတွေကို အခြေခံပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက်လည်း အလားတူ တွက်ချက်ပေးဖို့ ကြိုးစားထားပါတယ်။
အမေရိကန်ဟာ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယပြီးရင် ကမ္ဘာမှာ တတိယ လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ လူဦးရေ သန်း ၃၀၀ကျော် (မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၆ဆခန့်) ရှိနေပါတယ်။
၂၀၀၀ပြည့်နှစ်မှာ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ၂၈၄,၈၀၀,၀၀၀ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲက လိင်တူချစ်သူ အရေအတွက်ကို ခန့်မှန်းရာမှာ ၁၉၉၂မှာ ကောက်ခံခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဘ၀ စစ်တမ်း (NHSLS) ကို အခြေခံ တွက်ချက်ထားပါတယ်။ အဲဒီ ခန့်မှန်းချက်အရ အမေရိကန်မှာ လိင်တူချစ်သူအဖြစ် ခံယူထားသူ ၄,၃၀၀,၀၀၀ ဦး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၁.၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား အားလုံးရဲ့ ၂ရာခိုင်နှုန်း (စုစုပေါင်း လူဦးရေရဲ့ ၀.၇ ရာခိုင်နှုန်း) က ဂေး များအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အမျိုသမီးအားလုံးရဲ့ ၀.၉ ရာခိုင်နှုန်း (စုစုပေါင်း လူဦးရေရဲ့ ၀.၃၂ ရာခိုင်နှုန်း) က လက်စဘီယံ များအဖြစ် ခံယူထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ လူဦးရေ (၂၀၀၀ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း အရ)
လူဦးရေ စုစုပေါင်း ရာခိုင်နှုန်း
နိုင်ငံလူဦးရေ ၂၈၄, ၈၀၀, ၀၀၀ ၁၀၀%
အမျိုးသမီး ၁၄၅, ၅၃၂, ၈၀၀ ၅၁.၁%
အမျိုးသား ၁၃၉, ၂၆၇, ၂၀၀ ၄၈.၉%
လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေ GLBT (gay, lesbian or bisexual)
လူဦးရေ စုစုပေါင်း ရာခိုင်းနှုန်း
လိင်တူချစ်သူဦးရေ ၄,၃၀၀,၀၀၀ ၁.၅၁ %
မဲပေးခွင့်ရှိသည့် လူဦးရေ မဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်း
အမျိုးသမီးချင်းချစ်သူ (လက်စဘီယံ) ၉၀၀,၀၀၀ ၀.၃၂%
အမျိုးသားချင်းချစ်သူ (ဂေး) ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀.၇ %
လိင်တူ၊ လိင်ကွဲ နှစ်မျိုးလုံး ချစ်သူ ၁,၄၀၀,၀၀၀ ၀.၄၉ %
ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်က ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပြီး အခု ၂၀၁၀မှာ အမေရိကန် လူဦးရေ သန်း ၃၁၀ခန့် ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေဟာလည်း ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ကထက် ပိုများနေပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
၂၀၀၈ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပစဉ်မှာ စီအင်န်အင်န် သတင်းဌာနက ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းအရ မဲပေးသူ အားလုံးရဲ့ ၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ လိင်တူချစ်သူအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူများ ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ ပေါ်လစီ အကြံပေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် UCLA တက္ကသိုလ်မှ The Williams Institute ကတော့ အမေရိကန်မှာ လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေ ၈.၈သန်းခန့် ရှိနေပြီလို့ ၂၀၀၅-၀၆ မှာ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတွေကို အခြေခံပြီး ကြေငြာထားပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ ၁၀နှစ်တစ်ကြိမ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနေတာမို့ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ သန်းခေါင်းစာရင်း ထပ်မံကောက်ယူမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပိတ် စာရင်းအတိအကျကို ၂၀၁၁ခုနှစ်ကျမှ အများပြည်သူကို ထုတ်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုရှိမလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
လက်ရှိ အနေအထားအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေ မပြောနဲ့ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ကိုတောင် ခန့်မှန်းရ ခက်ခဲပါတယ်။ ပြည်တွင်းက စာနယ်ဇင်း တွေမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေကို သန်း ၅၀ကျော်၊ သန်း ၆၀နီးပါးလို့ လက်ခံရေးသား နေကြပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အင်န်ဂျီအို တွေကတော့ ၄၈သန်းလို့ ထုတ်ပြန်သုံးစွဲ နေကြပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ လူသုံးများတဲ့ အမေရိကန် စီအိုင်အေ အဖွဲ့ရဲ့ CIA Factbook ၀က်ဘ်ဆိုဒ် မှာတော့ ၅၃ သန်းလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မကြာသေးမီက အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကားရေးထားတဲ့ ဆင်ဟွာသတင်း တစ်ပုဒ်ကတော့ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ ၅၉သန်းကျော် ရှိပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ယူကေနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း တွေကတော့ ပြည်ပရောက်နေသူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်မခံရသူ တွေကိုပါ ထည့်တွက် လိုက်မယ်ဆိုရင် သန်း၇၀နီးပါးထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ ပြောထားတာ ၀ီကီပီးဒီးယား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
၁၉၈၃ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခံခဲ့စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ၃၅သန်း ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်က ကောက်ယူခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးကို ရာနှုန်းပြည့် မဟုတ်ပါဘူး။ အလွန် ဝေးလံတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသတွေနဲ့ မငြိမ်သက်သေးတဲ့ ဒေသတွေမှာ ကောက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
အခု နှစ်၂၀နီးပါး ကြာခဲ့ပြီမို့ လူဦးရေ နှစ်ဆနီးပါးခန့် တိုးပွားနေပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။ မြန်မာ့ လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေကို ခန့်မှန်းကြည့်ရာမှာ အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ၅၉သန်းဆိုတဲ့ ပမာဏဟာ နောက်အကျဆုံး ဖြစ်ပြီး၊ တရားဝင် လည်းဖြစ်လို့ အခြေခံအဖြစ် ယူလိုက်ပါတယ်။ ဒီ ၅၉သန်းမှာ ကျား ၂၉.၃၉သန်း နဲ့ မ ၂၉.၇၃သန်း ရှိပြီး အသက် ၁၈နှစ်ပြည့် အရွယ်ရောက်သူ ဦးရေ သန်း၃၀ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
လူအများ လက်ခံထားကြတဲ့ ပျမ်းမျှ လူ၁၀ဦးမှာ တစ်ဦးဟာ ဂေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကင်ဆေရဲ့ သီအိုရီ အရဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိင်တူချစ်သူ ၅.၉သန်း (၆သန်းနီးပါး) ရှိပြီး ဂေး နဲ့ လက်စဘီယံ သုံးသန်း နီးပါးစီ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ အတော်လေး များပြားနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဧရိယာရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံရှိတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မှာတောင် လူဦးရေ ၆သန်း မရှိသေးပါဘူး။ လူဦးရေ သန်း၃၀၀ကျော် ရှိပြီး အတွေးအခေါ် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့ လူဦးရေထက်တောင် များနေတာမို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အမေရိကန်မှာ လိင်တူချစ်သူ လူဦးရေ တွက်ချက်ရာမှာ အသက် ၁၈နှစ် ပြည့်ပြီးသူ များကိုသာ တွက်ချက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်မရောက်သေး သူများရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူချက်ဟာ အတည် မဖြစ်နိုင်သေးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ထက် ၁၈နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဦးရေ သန်း၃၀ကို အခြေခံရင် အမှန်နဲ့ ပိုမိုနီးစပ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို သန်း၃၀ရဲ့ ၁၀ပုံ တစ်ပုံ၊ ၃သန်းရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ကိန်းဂဏန်းကိုလည်း အတည်ယူလို့ မရသေးပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ လိင်တူချစ်သူ ဆိုတာ လိင်စိတ်ခံစားမှု လိင်ဆက်ဆံမှု တွေကို အခြေခံ သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ပဲ၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု ကိုသာ အခြေခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအဆင့် လိင်တူချင်း တက်မက်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်၊ နောက်တစ်ဆင့် လိင်တူချင်း လိင်ဆက်ဆံတယ် ဆိုတာတွေနဲ့တင် လိင်တူချစ်သူလို့ မသတ်မှတ် နိုင်ပါဘူး။
ဒီ ကိန်းဂဏန်းထဲမှာ မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာသာရေး ကလာတဲ့ ဖိအားတွေကြောင့် မိန်းမယူပြီး၊ အပုန်းဘ၀နဲ့ပဲ နေထိုင်သွားချင်တဲ့ သူတွေက အများစုအဖြစ် ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြား ဖိအားကြောင့်ဖြစ်စေ လိင်တူချင်း ဆက်ဆံနေပေမယ့် လိင်တူချစ်သူ မဟုတ်တဲ့ သူငယ်တွေ၊ အော်ဖာတွေ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးက လူအများကို ထုတ်ပြောသည် ဖြစ်စေ၊ ထုတ်မပြောပဲ ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်တိုင် လိင်တူချင်း ချစ်သူပါလို့ ယုံကြည်လက်ခံ ထားမှသာ (လိင်ကိစ္စအတွေ့အကြုံရှိရှိ၊ မရှိရှိ) လိင်တူချစ်သူအဖြစ် သတ်မှတ် ရေတွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသေးစိတ် စကာတိုက် စစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် တကယ့် အရေအတွက်က သုံးသန်းထက် အများကြီး လျှော့နည်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ ရတာက အင်န်ဂျီအိုတွေက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေပါ။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး လိင်တူချစ်သူ (အင်န်ဂျီအို အခေါ် MSM)တွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အချို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ ဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့ ထိရောက်မှု အတွက် နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာတွေ ရေးသားထုတ်ပြန် ကြရပါတယ်။ MSM တွေကို အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့ ပက်သက်လို့ high risk group အဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက် နေတာကြောင့် စုစုပေါင်း ရှိနေတဲ့ MSM လူဦးရေကို ခန့်မှန်းပြီး၊ သူတို့ ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ MSM အရေအတွက်နဲ့ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်မှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ တွက်ချက်ကြရပါတယ်။
ကျွန်တော် အင်တာနက်ကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ UNGASS အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၀ခုနှစ် Country Progress Report အရ ခန့်မှန်း MSM လူဦးရေကို ၂၄၀,၀၀၀ (နှစ်သိန်းခွဲခန့်)လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအထဲကမှ၂၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ခံထားရပြီး ၃၈၀၀၀ ကနေ ၃၂၀၀၀ ဦး အတွင်းသာ အင်န်ဂျီအိုတွေ ကပေးတဲ့ အကူအညီကို ရရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီ နှစ်သိန်းခွဲဆိုတဲ့ ပမာဏဟာလည်း အမှန်ရှိတာထက် လျှော့နည်းနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ အကြောင်းက MSM ဆိုတဲ့ အတိုင်း အမျိုးသားချင်း ချစ်သူ (ဂေး)တွေကို အဓိကထား ကောက်ယူထားတာ ဖြစ်လို့၊ အမျိုးသမီးချင်း ချစ်သူတွေနဲ့ လိင်တူလိင်ကွဲ နှစ်မျိုးလုံးချစ်သူ အရေအတွက် ပါဝင်ခြင်း မရှိလို့ပါပဲ။
နောက်တစ်ခုက ဒီအင်န်ဂျီအိုတွေဟာ လိင်တူချစ်သူတွေကို ၀ါသနာတူ မိတ်ဆွေ အစုအဖွဲ့တွေ ဆီက တစ်ဆင့် ပညာပေး စည်းရုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် လိင်တူချစ်သူ ဖြစ်တာကို သိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိမှ၊ တနည်းအားဖြင့် အနည်းနဲ့ အများ ပွင့်နေမှသာ ဒီအုပ်စုထဲမှာ အကျုံးဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသိမခံတဲ့ အပုန်းတွေ၊ ဂေးအချင်းချင်း ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံခြင်း မရှိတဲ့ ဂေးတွေဟာ၊ ဒီအထဲမှာ မပါဝင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ မြေပြန့်က မြို့ကြီးတွေကို အခြေခံ တွက်ချက်ထားတာ ဖြစ်လို့၊ ဝေးလံသီခေါင်တဲ့ ကျေးလက်က တောသူတောင်သား ဂေးတွေနဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသက တိုင်းရင်းသား ဂေးတွေရဲ့ အရေအတွက်လည်း မပါဝင်နိုင်ပါဘူး။
ဒီထက် ပိုမိုတိကျတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ရဖို့ကိုတော့ ပိုမိုတိကျတဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း ကိန်းဂဏန်းတွေ နဲ့ အခြား လှုမှုစစ်တမ်းတွေ တစ်နိုင်ငံလုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကောက်ခံနိုင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ ဒီလို ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း နောက်နှစ် ၂၀လောက်အတွင်း ဖြစ်လာဦးမှာ မဟုတ်တာ အသေအချာပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိင်တူချစ်သူ အများဆုံး သုံးသန်းခန့် ကနေ အနည်းဆုံး သုံးသိန်းဝန်းကျင်လောက် ရှိနေတယ်လို့ ယူဆရင်တော့ နီးစပ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
http://www.coloursrainbow.com/articles/37-general-knowledge-/352-2010-07-18-22-22-41.html မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Die die let me die.
Deadline looms to respond to stay in same-sex marriage ban ruling
August 5, 2010 — Updated 0817 GMT (1617 HKT)
“Chief U.S. District Judge Vaughn Walker in San Francisco ruled on Wednesday that California’s Proposition 8 violates the U.S. Constitution.”
အပေါ်ကသတင်း စီအန်အန်မှာတက်လာတာမို့ … တော်တော်အံသြသွားပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေကို ကိုင်ပြောလာတာမို့ ကြည့်ရတာ…လိင်တူတွေ လက်ထပ်လို့ရတော့မယ်ခေတ်…မဝေးတော့လို့ထင်ပါကြောင်း..။
မြန်မာပြည်ကို နောက်ဆယ်စုနှစ်လောက်ဆို ရောက်ကောင်းပါရဲ့..။
( ယောက်ျား၊မိန်းမနဲ့တောင် တော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့လူမှုရေးတွေဖြစ်နေကြတာ…။ လိင်တူတွေလက်ထပ်နိုင်ကြရင်တော့ ..ရှေ့ နေတွေအရင်ဆုံး…ထောကြောပါပဲ..။)
နကိုက..ယောက်ျား+ မိန်းမ/မိန်းမ + ယောက်ျား။ ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ပဲရှိတာမှာ..။
အဲဒီနောက်.. ယောက်ျား+ယောက်ျား/ မိန်းမ+မိန်းမ ဖြစ်လာမှာဆိုတော့…
ကျနော်အမြင်ပြောရရင် လောက မှာ ဒီကိစ္စထက် အရေးကြီးသော
လိုအပ်နေသော အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေပါရဲ့နဲ့ဒါလေးကို
ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်လို့ ခံစားနေကြတာ စကားပုံရိုင်းရိုင်းပြောရင်
ရောဂါ ပေါင်းစုတွေကလည်း ဒီကနေ စကြတာပဲ
ဒါကရော… ခေတ်မီတာပဲလား…. သဘာဝ ကိုသဘာဝအတိုင်းလက်ခံလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ….
ယောက်ျား+ယောက်ျား/ မိန်းမ+မိန်းမ ဖြစ်လာမှာဆိုတော့…တော်တော်ကိုလက်မခံနိုင်စရာပါပဲ….ငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်စေ ဖိအားကြောင့်ဖြစ်စေ လိင်တူချင်း ဆက်ဆံနေပေမယ့် လိင်တူချစ်သူ မဟုတ်တဲ့ သူငယ်တွေ ရှိ်ပါတယ်။
လိင်တူဆက်ဆံမှ ရောဂါကူးတာ မဟုတ်ဘူး
ကျန်းမာရေး ဗဟုတုသ မရှိဘူးလား?
အဲ့တာကို ပြောတာ … အသိတရားရှိ တာနဲ့အသိပညာရှိတာ တော်တော်ကွာတယ်။
အသိတရားနဲ့ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် အတွေးတွေကြားမှာပဲ နစ်မြောနေမှာ ..
စာတွေများများ လေ့လာကြပါ ဝေဖန် ရှုံ့ချဖို့ ပဲ မဲနေပါနဲ့ 
ဝေဖန်ရှုံ့ ချချင်ရင် လဲ ဗဟုတုသ ကြွယ်ဝအောင် လေ့လာ ထားကြပါဦး
sth error … sry abt that
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ မရှိဘူးလား?
ဝေဖန်ရှုံ့ ချချင်ရင် လဲ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝအောင် လေ့လာ ထားကြပါဦး
အဲလို လူမျိုးတွေ များလာရင်တော့ မျိုးတုံးတော့ မှာပဲနော်…
အခု နောက်ပိုင်းစာတွေ မှ လိင်တူ ချစ်သူဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပေါ်တင်မနေရဲတဲ့ လူတွေ မဖြစ်တဖြစ်လေးတွေတောင် ဖြစ်လာအောင် သိမ်းသွင်းနေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ ဘုရားဟောတဲ့ ခေတ်ကြီးတော့ တော်တော် နီးပြီထင်ပါရဲ့။ မြီးကောင်ပေါက်တွေတော့ စိတ်ဓါတ်တွေ အရောင်ဆိုးခံရတော့မှာဘဲ
ဘယ်သူ့ ကိုမှသိမ်းသွင်းစရာမလိုဘူး…ဒါမျိုးကသိမ်းသွင်းလို့ ရတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူးလေ…..
ယောက်ျားဆိုလည်း ယောက်ျား မိန်းမဆိုလည်းမိန်းမပေါ့ .. သဘာဝက ပေးတဲ့အတိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်တယ် …. မဟုတ်ရင်လည်း အတိတ်ကကံက မလှတော့ ဒီဘ၀ခံစား၇တယ်ပဲ သဘောထားရမှာပေါ့လေ … ကျန်းမာရေးရှူထောင့်ကနေကြည့်လည်း ဒါက ဟိုမုန်းတွေပုံမမှန်လို့ ဖြစ်တာပဲ.. လူလူချင်းကို ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် အားအားရားရားခြောက်နေရင်တော့ မုန်းတယ် … ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်မရဘူး … ကိုယ့်ဘ၀ကိုကိုယ် သဘာဝကပေးတဲ့အတိုင်း ပီပီသသ လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ် …
ကြည့်မရဘူးပြောရအောင် ဘယ်သူကကြည့်ပါလို့ တောင်းဆိုနေလို့ လဲ